မြန်မြန်စောင့်ပါ - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > Josepf Tkach ၏ > တက်မြန်မြန်နှင့်စောင့်ဆိုင်း!
တစ်ခါတစ်ရံစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ကိုသိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်ဟုထင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စောင့်ဆိုင်းနေသောကာလကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေရသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ငါတို့အနောက်အနောက်ကမ္ဘာ၌ကားတွင်ထိုင်နေစဉ်နှင့်သီချင်းနားထောင်နေစဉ်အမြန်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်၌သံမဏိအဝတ်အစားများဖြင့်ငါးမိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဆိုလျှင်စိတ်ပျက်။ စိတ်မရှည်နိုင်။ မင်းရဲ့အဖွားမြင်ပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသောကြောင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်လည်းရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာများကိုအဘယ်ကြောင့်လုပ်ဆောင်သည်ကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ ဆုတောင်းပဌနာပြုသမျှတတ်နိုင်သမျှပြု။ မရကြဘူး။
ရှမွေလသည် စစ်တိုက်ရန် ယဇ်ပူဇော်ရန် ရှမွေလကို စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ရှောလုသည် စိုးရိမ်ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားသည် (၁ ရာ3,8) စစ်သည်များသည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာကြပြီး အချို့က သူ့ကိုထားသွားကာ အဆုံးမဲ့စောင့်ဆိုင်းနေပုံရသော စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် သူကိုယ်တိုင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ရှောလုမင်းဆက်၏အဆုံးသတ်သို့ ဦးတည်သွားသည် (း၁၃-၁၄)။
တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ရှောလုကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မုန်တိုင်းထန်သောပင်လယ်များကိုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန်အဘယ်ကြောင့်နားမလည်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့စောင့်နေပြီးစောင့်နေတယ်၊ ​​အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့စောင့်ဆိုင်းရတာကငါတို့လုပ်နိုင်တာထက်ကျော်လွန်နေပုံရတယ်။ ငါတို့ Pasadena မှာငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အားလုံး Pasadena မှာရောငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးပါခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သစ္စာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘ ၀ ၌ကြုံတွေ့ရသည့်အရာအားလုံးအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်သွားမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သူကထပ်ခါတလဲလဲကသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ တခါတရံသူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခများကြုံတွေ့ရပြီးတစ်ခါတစ်ရံ - ပို၍ ရှားပါးပုံရသည် - သူသည်ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်ပုံမရသောအရာကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူအားယုံကြည်ကိုးစားရန်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည် - သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မှန်ကန်ရာနှင့်ကောင်းကျိုးကိုပြုလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောညမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည့်ခွန်အားကိုသာတွေ့မြင်ရပြီးနာကျင်မှုအတွေ့အကြုံကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်လာသည်။
သို့တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ ကြုံတွေ့နေရချိန်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အနည်းငယ်မျှ သနားစရာမဟုတ်ပေ၊ “ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် အလွန်ထိတ်လန့်သွားပါသည်။ အိုထာဝရဘုရား၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး၊ 6,4) ရှေးဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာဘာသာပြန်ကျမ်းက “သည်းခံခြင်း” ဟူသောစကားလုံးကို “ရှည်လျားသောဆင်းရဲဒုက္ခ” ဖြင့် ပြန်ဆိုခဲ့သော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည်။
လုကာသည် ဧမောက်မြို့သို့သွားရာလမ်းတွင် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ရသည့် တပည့်နှစ်ယောက်အကြောင်းကို လုကာပြောပြသည်မှာ သူတို့၏စောင့်ဆိုင်းခြင်းမှာ အချည်းနှီးဖြစ်ပြီး ယေရှုသေဆုံးသွားသောကြောင့် အားလုံးဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ပြောပြသည်။4,17) သို့သော် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူတို့မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကို ထားရစ်ခဲ့သော ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော သခင်သည် ၎င်းတို့အနားသို့ ကြွသွားပြီး အားပေးစကားများ ပေးခဲ့သည် (း၁၅-၁၆)။ တခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၌ အလားတူဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည့်နည်းလမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့အားရှာဖွေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ - နောင်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ကျွန်ုပ်တို့ကို မကြာခဏမမြင်တွေ့နိုင်ပါ။
ယေရှုသည် သူတို့နှင့်မုန့်ကိုဖဲ့သောအခါမှ “သူတို့မျက်စိပွင့်၍ ကိုယ်တော်ကိုမှတ်မိသဖြင့် သူတို့ထံမှပျောက်ကွယ်သွား၏။ လမ်းခရီး၌ ငါတို့အား မိန့်တော်မူ၍ ကျမ်းစာကိုဖွင့်တော်မူသောအခါ၊ ငါတို့စိတ်နှလုံးသည် ပူလောင်သည်မဟုတ်လော။” (း၃၁-၃၂)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ယောက်တည်း စောင့်မနေပါ။ မှောင်မိုက်သောညတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည်၊ အရာအားလုံးမပြီးဆုံးကြောင်းသိမြင်ရန် ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားနှင့် အလင်းကိုပေးတော်မူ၏။ သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်သောအခါမှ တစ်ယောက်တည်း ထားမည်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံခဲ့သည် (မ. ၂8,20).